Wokuqhawula umtshato, isirussian isimbo - Russia Ngaphaya
Ngokunxulumene-manani, wonke wesithathu emtshatweni kwi-Russia kuyaphela kwi-wokuqhawula umtshato yokuqala iminyaka emithathu. Umthombo: Photo cinezela Xa Valery Leeching ke boss onayo ngomhla wakhe nerves omnye kakhulu amaxesha amaninzi, abe punched kuye kwi-lingqina. Leeching waba abalawuli, kodwa waye waziva ngathi a hero -loo mini. I-real zoko yakhe intshukumo wabonakala kuphela emva koko. Valery waqala ukukhangela umsebenzi, kodwa xa wenza isicelo eso kuba imisebenzi, kwezo meko abaqeshi babefuna ezinxulumeneyo. Kwaye xa sukuba ngokuba yakhe yangaphambili indawo umsebenzi, Leeching ke yangaphambili boss wathi ukuba wayeyindoda lousy yabasebenzi. Leeching ke umfazi, Irina, begged kuye ukuba apologize yakhe endala boss kwaye buza umsebenzi wakhe emva.»Phambi kokuba intombi yethu yesibini nkqu waguqukela ezintandathu ubudala, yosapho lwethu kufuneka imali»Irina wathi.
Irina akusebenzi maternity leave, ngoko ke usapho kugqitywe ukuba kukrazulwa ngaphandle zabo apartment kwaye yiya kwi kunye Irina ke umama, Nina.
Nina kokuba zange liked Valery
Yena usoloko wayecinga ukuba intombi yakhe wenza impazamo enkulu kwi-marrying kuye, kwaye usapho ke ngoku imeko seemed ukuba kuvavanya yakhe ekunene. Ibambe phakathi umyeni kwaye umama, Irina wanika Valery i-ultimatum: yena avume athethe naye kude kube wenza uxolo kunye yakhe boss. Isigqibo waba catastrophic kuba young usapho. Valery waqalisa ukusela, kwaye lowo pushed Irina jikelele. Ekugqibeleni Nina intervened kwaye threw Valery ngaphandle apartment. Irina ezenziwe sesi sibini kuba wokuqhawula umtshato. Ingqokelela yamanani ukusuka kwi-Russia ke loluntu registry-ofisi bonisa ukuba uninzi marriages end kwi-wokuqhawula umtshato. Iminyaka elishumi eyadlulayo, wonke wesithathu Russian umtshato uphelile kwi-wokuqhawula umtshato namhlanje kungenxa wonke wesibini. Ngo, malunga, couples divorced lo, onayo watshata. Russia kokuba ephezulu wokuqhawula umtshato umyinge ehlabathini ngo- ngokunxulumene ezimanyeneyo. Sociologists kuthi ukuba eyona wenza ka-alaphukanga marriages ingaba alcoholism, iingxaki zemali kwaye crowded iimeko abaphila — kwaye abaninzi iimeko, zonke ezintathu.»Kwi lohlobo Russian apartment, kukho ngakumbi abantu kunokuba amagumbi. Abaninzi eliphakathi-iphelelwe couples? bahlale kunye nabazali babo ngenxa yokuba kuba akukho ndawo okanye ukuphila»watsho Alexander Sitelink, Associate Unjingalwazi Osapho Esesosiyoloji e-Moscow Urhulumente Ngezifundo. Abantu kwabo, nangona kunjalo, ndithi ngokwahlukileyo. Ngokunxulumene uphando yi-Zonke-Russian-Wonke uluvo lwam Uphando Umbindi (Visio) lwenziwa ngowe- ezinemigodi kuwo Russia, kuphela ezintathu ipesenti abantu bathi cramped izindlu iimeko ngabona isigqibo ifekta zabo wokuqhawula umtshato. Cheating beza kuqala, kunye amabini anesine ipesenti ye abaphenduli attributing i-downfall zabo marriages ukuba infidelity, yalandelwa intlupheko (ipesenti) ukungakwazi ukuhlanganisa kuchitha (ipesenti). Ngokunxulumene-manani, wonke wesithathu emtshatweni kwi-Russia kuyaphela kwi-wokuqhawula umtshato yokuqala iminyaka emithathu. Abantu amathathu anesihlanu kwaye phantsi i-akhawunti ye-ephezulu ipesenti divorces. Kodwa kukho enye, ezibalulekileyo inani abantu abo get divorced emva ekubeni babehlala kunye kuba amabini anesihlanu okanye amashumi amathathu eminyaka. Xa abantwana babo ingaba grown, babe bona akukho incopho kwi-siqhubeke kuba ezimbalwa.»Xa abantwana kukhula, abazali wawulahla umphefumlo wabo ngokufanayo intsimi ka senzo»watsho Kirill Khomok, Intloko Crossroads Psychological Embindini.»Kuya ikhangeleka ngathi isiphelo senkqubo edibeneyo projekthi iinjongo zithe kwenzeka, kwaye baya akaphumeleli ukufumana entsha okkt. Kukho couples ngubani onako imozulu zonke iintlobo ezininzi ezonakeleyo storms ngenxa yokuba? bonwabele ngamnye nezinye ke inkampani. Kodwa uninzi rhoqo, abantwana kuphela nto ukuba bagcine couples kunye»Ngokunxulumene sociologists, wemiceli-worries kuba divorcing abafazi kwi-Russia njengoko kwi-nakumanye amazwe ingaba kwezezimali, kwaye childcare. Nangona kunjalo, abaninzi divorced abafazi bonwabele yabo entsha indima njengoko breadwinner. Russian abafazi musa bakholisa ukuba rush kulo mtshato kwakhona. Abantu ngendlela wokuqhawula umtshato ingaba ngakumbi abachaphazelekayo malunga ilahleko territory — omabini literally kwaye ngokuzekelisayo. Kwi-psychological evakalayo, bamele ayisasebenzi nako ukucwangcisa kwezabo imigaqo kwindawo apho abantwana babo bahlala khona. Kwaye kwi-physical evakalayo, bamele banyanzeleka ukuba yiya ngaphandle komnye abahlala isithuba. Kangangokuba, abaninzi Russian abantu umda zabo zonke izigaba uxanduva — by emva kunye nabazali babo. Likwakwazi ukwahlula uncommon kuba Russian abantu remarry ngokukhawuleza.»Abaninzi divorced abantu neglect iimbopheleleko zabo ezifana nemfundo yabo abantwana okanye zabo zemali uxanduva»watsho Kristofer Sodder, i-associate unjingalwazi e emfundo Ephakamileyo Yesikolo ka-Ezoqoqosho Wesizwe Uphando Ngezifundo. Nawuphi na wokuqhawula umtshato, abantwana bamele i-victims. Emva wokuqhawula umtshato, baya idla bahlale kunye zabo oomama kwaye ngokuhamba kwexesha, abo ubudlelwane kunye ooyise ngokunjalo. Ngokunxulumene i-imbono amazibuko yi-Zonke-Russia-Wonke uluvo lwam Uphando Umbindi (Visio), kwiintsuku ezintlanu iminyaka engama-wokuqhawula umtshato. percent sooyise bona abantwana babo rhoqo. Phakathi — eminyaka emva wokuqhawula umtshato, nani drops kwi. isithoba ipesenti, kwaye emva iminyaka elishumi, drops kwakhona -.
I-ipesenti divorced zooyise ngubani kuthi abasokuze bona abantwana babo rises ukusuka kwi. u-ipesenti yokuqala emihlanu ukuya. u-ipesenti after eminyaka.»Kusapho umthetho, ootata kufuneka no amalungelo ukukhulisa abantwana babo nkqu ukuba inkundla ii-odolo ukuba umntwana kufuneka ohlala neqabane lakhe okanye umama»watsho Artem Zaimets, a lawyer specializing kusapho umthetho. Kodwa ngokunxulumene-manani, ishumi elinesixhenxe ipesenti sooyise musa thatha ithuba oku ithuba ngawo onke, admitting ukuba zange ndibona abantwana babo emva wokuqhawula umtshato. Kwelinye extreme ingaba handful sooyise abo kidnap abantwana babo ukususela zabo ex-abafazi, nto ayiyo ulwaphulo-mthetho phantsi Russian umthetho.»Asixhenxe ipesenti ye iimeko, ex-amaqabane kuba ubukrakra iintshaba»watsho Kirill Khomok.»Phantse rhoqo, wokuqhawula umtshato ngu ebone njengokuba psychological trauma kwi-mat kunye ukufa a wayemthanda omnye»Kodwa nangona ezinzima zoko ka-wokuqhawula umtshato, psychologists ukugcina ukuba kuba abo bathabatha ukuba route, wokuqhawula umtshato ayiyo tragedy, kodwa i-ithuba lokukhula. Kwaye kubonakala ngathi ukubonelelwa Russian couples ingaba basing zabo iintshukumo kule indlela ukucinga, preferring ukuhlala kunye hayi»happily ngonaphakade emva»kodwa ngenye nje ixeshana elifutshane
Enzima iinkalo zobuchule - Uguqulelo kwi-Russian - isixhosa imizekelo - Russian Umthetho